Ukusekela Ngeceramic Ensimbi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ukusekela Ngeceramic Ensimbi - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 13 ye-Ukusekela Ngeceramic Ensimbi)
I-metallized ring ceramic ehlanganiswe ngensimbi yensimbi
Imihlangano ekhonjiwe nge-Ceramic-to-metal iyisicelo esivamile kakhulu samanje, i-voltage ephakeme, uhlelo lokusebenza oluphezulu lokucindezela ukucindezela. Ngemuva kwalokho, i-metallized ceramic insulator idlala indima ebalulekile kuyo. I-Jinghui inikeza ubuciko bokuzicabangela nge-aluminium oixde ceramics yezempi,...
Idayimani ipholile 99.5% insika ye-alumina yensimbi
Insika yeCeramic I-Ceramic pillar yenziwe ngokucwenga okuphezulu kwe-alumina yocaramic material, eyakhiwe ngokucindezela omile, ukufakelwa umjovo, ukucindezela okushisayo, nokushisa okushisa okuphezulu nokukhanda okucacile, ngenani lezinzuzo eziningana, njengokumelana nokumelana nokushisa, ukumelana nokubola, ukuqina...
I-Zirconia (i-ZrO 2 ) i-ceramic ehlukile ehlukile. Izakhi ezikhiqizwa yi-zirconia ziveza izinto ezizenzekelayo, ezishisayo nezigesi ezifana nokuqina okuphezulu nokuguquguquka, ukunyuka okuphansi kwe-thermal nokugxila okuphezulu. Ukushisa izindawo zokuvikela nokuphefumula kwe-oxygen-ion ukukhombisa ukuthi i-zirconia...
I-Zirconia / ZrO2 / i-Zirconium I-oxide yinto eyaziwa kakhulu ephezulu yokusebenza phakathi kwazo zonke izakhi ze-oksijithali. Lezi zinhlobo zezingxenye ze-eramic zenziwe ngokususelwa ku-Zirconium Oxide ngokuvamile, kodwa ziqukethe amaphesenti athile amanye ama-oxide engeziwe afana ne-Yttria (Y2O3) noma i-Magnesia...
I-alumina yensimbi ekhonjiwe ye-ceramic yakha umhlahlandlela
Umhlahlandlela we-Ceramic umdwebo uvame ukwenza ngo-95%, 99% i-alumina ngenxa yokumelana nokugqoka okungaphezulu kokuphezulu, ukuhlukunyezwa okuphansi kunamaplastiki nezensimbi. Siye senza i-textile ceramics iminyaka eminingi, umhlahlandlela we-ceramic we-slit njengomuntu ojwayelekile emshini wokugqoka, kunezinhlobo...